Imali engcono kakhulu ye-digital yokutshala ngo-2021. Izimali zedijithali ezikhulayo ezishisayo ezinokuqina okuphakeme (ubuncane bokungabi namandla).
Izimali eziyishumi eziphezulu kakhulu ze-digital zokudoba nokuthengwa kwemayini, zikhula ngokuqhubekayo ngentengo yezimakethe zemali yedijithi ezinyangeni ezintathu zokugcina.
Ukukhula okusheshayo kwezimali zedijithali
Ukukhula kwamaphesenti wekota
Polymath (POLY) 305.63 %
Serum (SRM) 149.32 %
Ark (ARK) 115.44 %
Storj (STORJ) 61.28 %
Enjin Coin (ENJ) 42.76 %
(UNISWAP) 41.66 %
Numeraire (NMR) 35.31 %
Telcoin (TEL) 32.55 %
Dash (DASH) 31.18 %
SushiSwap (SUSHISWAP) 23.88 %
I-idijithali yemali ehamba phambili ingumqondo ocatshangwe kumtshalizimali ngamunye.
Ama-Crystalcurrensets emhlabeni asetshenziswa njengendlela yokutshala imali futhi njengethuluzi lokukhokha, i-analogue yemali.
I-crypto ehamba phambili njengemali, njengethuluzi lokukhokha inqunywa ijubane lokukhokha, ikhomishini encane noma ukungatholakali kokuthengiselana ngakunye, inani labanikazi bama-wallet ama-crypto, kanye nokulula ukushintshana ngemali yangempela.
I-idijithali yemali ehamba phambili njengendlela yokutshala imali kunqunywa inzuzo yayo, ukukhula okungapheli kwesilinganiso se-idijithali yemali kanye nokuqina kwesilinganiso.
Insizakalo ye-cryptoratesxe.com Imali engcono kakhulu ye-digital akhombisa i-crypto enhle kakhulu ngokutshalwa kwemali.
Silandelela amazinga okushintshaniswa kwe-inthanethi awo wonke ama-crypto, ukushintshwa kwezinga lokushintshaniswa, ukuguquguquka kwamandla, amandla wokukhula kanye nezinye izinhlaka ukukala ama-izimali zeDividenti amahle kakhulu emhlabeni.
Ithebula le-izimali zeDividenti ehamba phambili libonisa i-3 ephezulu ye-crypto ehamba phambili yokutshala imali. Ngokusebenzisa itafula le-cryptocurrensets engcono kakhulu, ulwazi luvuselelwa online.
Ishadi lama-cryptocurrensets amahle kakhulu likuvumela ukuthi ubone umlando omfushane wesilinganiso esikhethiwe ku-crypto yethu ephezulu kakhulu. Kwigrafu ye-crypto enhle kakhulu ungabheka ukuqina kokukhula kwemali bese unquma ngokutshala imali kwi-idijithali yemali enhle kakhulu.
Ama-izimali zeDividenti akhulayo angama-cryptos, isilinganiso sawo esiye sakhula ngokuhamba kwesikhathi.
Ukukhula kwe-Idijithali yemali kungumqondo ohlobene. Izinga lemakethe lanoma iyiphi i-idijithali yemali ethengiswa kwi-crypto-exchange lihlala liguquka, landa futhi liyancipha. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi ukhulume ngokwanda noma ukwehla kwezinga lokushintshana lesikhathi esithile.
Kunezilinganiso ezihlukile zokulinganisa zokukhula kwe-idijithali yemali. Enkonzweni yethu Imali engcono kakhulu ye-digital, sisebenzisa esinye isilinganiso esaziwa kakhulu sokukhula kwe-idijithali yemali ezinyangeni ezi-3 ezedlule.
Kungukunyuka okuphezulu kwesilinganiso se-crypto ngaphezulu kwezinyanga ezi-3 esisihlaziya njengokukhuphuka okuhle kakhulu kwesilinganiso se-idijithali yemali.
Ama-Izimali zeDividenti ngokuqina okuncane.
I-Izimali zeDividenti enokuguquguquka okuncane - lawo ma-izimali zeDividenti anesilinganiso sawo sokushintshashintsha sinokuguquguquka okuncane. Ngaphandle kwalokho, ama-cryptocurrensets ane-volatility encane angabizwa ngokuthi ama-izimali zeDividenti ngesilinganiso sokushintshanisa esizinzile kakhulu.
Ukuguquguquka okuncane kulungele ukutshalwa kwemali isikhathi eside. Ukuguquguquka okubukhali kwesilinganiso sokushintshaniswa kwemali ye-idijithali yemali yakho konke ukugqugquzela ukubekeka phambili kanye nokungabikezeli.
Ukutshala imali kuma-izimali zeDividenti ngamandla amancane kuyisizathu sokutshala imali isikhathi eside.
Imali engcono kakhulu ye-digital 2021
Imali esezingeni eliphezulu ye- 2021 iyisevisi yamahhala online yewebhusayithi yethu ekhombisa i-TOP izimali zeDividenti ngokukhula okungcono kakhulu kwesilinganiso sokushintshashintsha kwezimali kanye nokuqina okuncane kwe- 2021.
I-crypto enhle kakhulu ye- 2021 ilinganiselwa ngokusekelwe ekuhlaziyweni kwezinyanga ezintathu ezedlule. Siqhathanisa ukukhula kwesilinganiso sokushintshwa kwemali ye-idijithali yemali kanye nokuqina kwayo noma ukuqina kwaso futhi sakha isilinganiso kanye ne-TOP yama-cryptocurrensets amahle kakhulu ku- 2021.
Isilinganiso sama-cryptocurrensets amahle kakhulu we- 2021 ahlanganiswa nsuku zonke. Sebenzisa insizakalo yethu ukukhetha i-idijithali yemali enhle kakhulu yokutshala imali yesikhathi eside.